နိုင်ငံခြားမှာ ပတ်စ်ပိုစ့် ပျောက်သွားခဲ့ရင်. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Travel » နိုင်ငံခြားမှာ ပတ်စ်ပိုစ့် ပျောက်သွားခဲ့ရင်.
နိုင်ငံခြားမှာ ပတ်စ်ပိုစ့် ပျောက်သွားခဲ့ရင်.
Posted by Shar Thet Man on Apr 10, 2019 in Travel |2comments
ဒီပို့စ်ကတော့ မွန်လေးကိုယ်တွေ့မဟုတ်ပါဘူး။ မွန်လေးနဲ့အမျိုးဝမ်းကွဲတော်သူ၊ ရွယ်တူလည်းဖြစ်၊ လပဲငယ်တဲ့ ညီမလေးတစ်ယောက် oversea သွားရင်း ပက်စ်ပို့ပျောက် သွားခဲ့ပြီး သူဘယ် လိုပြန်လျှောက်ခဲ့လဲဆိုတာကိုသိစေချင်လို့ြ့ပန်ရှယ်ချင်ရုံသက်သက်ပါ။ 😁😁 အကယ်လို့မွန်လေး တို့ ပျောက်ခဲ့ရင်လည်း ဘယ်လိုလုပ်ဆောင် သင့်တယ်၊ ရှောင်သင့် တယ်ဆို တာလေး ပါ ပြောပေးချင်ပါတယ်။
#ပျောက်ပုံ (သို့) ခါးပိုက်နှိုက်ကျွမ်းကျင်ပုံ 😈
အဲ့ညီမလေး ရှုရှားကို အလည်အပတ်သွားတုန်းကပေါ့။ တစ်ရက် မြို့ထဲကို တိုးနဲ့ လျှောက် လည်တာ ဖုန်းထုတ်သုံးခါနီးကျမှ လွယ်လာတဲ့အိတ် က မရှိတော့မှန်းသိတယ်။ 😧အဲထဲမှာ ဖုန်းနဲ့ ပက်စ်ပို့တွေကထည့်ထားတာဆိုတော့ အကုန်ပါသွားရော။ 😵ပိုက်ဆံတွေကတော့ အမေ့ကိုအပ်ထားလိုက် တော့မပါသွားပေမယ့် အိတ်ကိုဘယ်အချိန် ကနေဖြတ်ပြီးဘယ်လိုယူ သွားမှန်းမသိလိုက်တာကတော့ သူတို့နိုင်ငံရဲ့ ခါးပိုက်နှိုက်တွေဘယ်လောက် ကျွမ်းကျင် အဆင့်ရောက်လဲသိနိုင်ပါတယ်။
💪🏻 ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ .. 💪👇👇👇
သူအရင်ဦးဆုံး တိုးမှာလိုက်လာတဲ့ တိုးလီဒါကို အသိပေးပါတယ်။ (ဒီနေရာ တစ် ချက်ပြောချင်တာက မွန်လေး တိုးလီဒါအဖြစ်နိုင်ငံခြား ကိုလိုက်ပေးခဲ့ဖူးပါတယ်။ ခရီးသည်တွေရဲ့ ပက်စ်ပို့အကုန်မွန်လေး ကသိမ်းထားပေးရပါတယ်။ လိုအပ် တဲ့နေရာကျမှ ခဏထုတ်ပေး တယ်။ ပြီးရင်ပြန်သိမ်းတယ်။ ဒီတိုးကျဘယ်လိုပါ လိမ့်ပေါ့..ဘယ်တိုးလဲ မပြောတော့ဘူးနော်)
အဲ့တိုးလီဒါကနေ ရဲစခန်းခေါ်သွားပါတယ်။ ရဲစခန်း ရောက်တော့ကိုယ်ပျောက် သွား တဲ့ နေရာနဲ့(ခန့်မှန်းခြေ) ပျောက်သွားတဲ့ အကြောင်း ကို ပြောပြီး. ပတ်စပိုစ့်မိတ္တူ နဲ့ ပြန်မယ့်ရက် လေယာဉ်လက်မှတ်ကို ပြပြီး ပျောက်ဆုံးကြောင်းထောက် ခံစာ တောင်းပါတယ်။
ရဲစခန်း ထောက်ခံစာ.. လေယာဉ်လက်မှတ်.. ပတ်စပိုစ့် မိတ္တူတို့နဲ့ အတူ မြန်မာသံရုံးသို့သွားပါတယ်။
သူ့မှာကံဆိုးချင်တော့ မနက်ဖြန်ဆို လေဆိပ်ဆင်းရတော့ မှာ..သံရုံးကတော့ ထောက် ခံစာပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒါမဲ့ လေဆိပ်က ပက်စ်ပို့မပါတဲ့အတွက်ကြောင့် ပေးမဆင်းပါဘူး။ 😞သူ့မိဘတွေကတော့ ပြန်သွားလို့ ရန်ကုန်ကိုရောက်နှင့်တာပေါ့။ ဖြစ်ချင်တော့ ဗီဇာက လည်း ပြန်တဲ့ရက်နဲ့ကွက်တိလုပ်ထားတာ။ ပက်စ်ပို့ကလည်းပျောက်ဆိုတော့ ရုရှားမှာ သောင်တင်နေတော့တာပေါ့။ 😕 ဒါပေမဲ့ မြန်မာသံရုံးက ကူညီပေးရှာ ပါတယ်။ မြန်မာသံရုံး ရဲ့  အရာရှိတစ်ယောက်အိမ်မှာနေ၊ တစ်ပတ်လောက်ကြာမှ ပက်စ်ပို့ပြန်ရပြီးရန်ကုန်ကိုပြန်ရောက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်။
#ဒီတော့ ခရီးထွက်တော့မယ်ဆို ဘယ်လိုမျိုးပြင်ဆင်ထားသင့်သလဲ.. 👇👇👇
ခရီး မထွက်ခင်ထဲက မိမိ ပတ်စပိုစ့် စာအုပ်ရဲ့ ဓါတ်ပုံပါတဲ့ စာမျက်နှာကို ဓါတ်ပုံရိုက်ထားပါ..မိတ္တူလည်းအပိုကူးထားပါ။ ✔️ ဗီဇာလိုတဲ့တိုင်းပြည် ဆိုရင် ဗီဇာစာမျက်နှာကိုပါ ဓါတ်ပုံရိုက်ထားပါ.. မိတ္တူလည်းအပိုကူးထားပါ။ ✔️ လေယာဉ်လက်မှတ် အသွားအပြန်ကိုလဲ ဓါတ်ပုံရိုက်ပါ.. မိတ္တူလည်းအပိုကူးထားပါ။ ✔️
နိုင်ငံခြားမှာရှိတဲ့ မြန်မာသံရုံးလိပ်စာတွေကို ဒီလင့်ထဲဝင်ကြည့်ပေးပါ။
ဒါကဖြစ်တတ်တဲ့သဘောပါ..ကိုယ်တွေက အနောက်နိုင်ငံဆိုအရမ်း အထင်ကြီးကြ တာလေ..အမှန်က အဲလိုနိုင်ငံတွေကပိုဆိုးပြီး ခါးပိုကနှိုက်တွေက အရမ်းလက်သွက် တာ.ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါ..ဘယ်ပဲသွားသွား အထူးသဖြင့်လူများတဲ့နေရာတွေသွားရင် အိတ်ကိုရှေ့ဘက်ထားပြီးသွားတာအကောင်းဆုံးပါလို့… 😊😊😊
Shar Thet Man has written 323 post in this Website..
ဆဲလျဖုံးနဲ့ ဓာတျပုံရိုကျရငျ.. Android ဆို.. Google Photo မှာ သှားသိမျး‌ပေးထားသမို့..
ပတျဈပို့.. ဗီဇာ..တငျမဟုတျ.. လမျးမှာအရေးကွီးတာ..မှတျတမျးထားလိုတာ‌တှအေကုနျ.. ဖုံးနဲ့သာ ရိုကျထား..သငျ့သပေါ့..